Timo Werner oo ka hadlay farqiga u dhexeeya labada horyaal ee Premier League iyo Bundesliga – Gool FM
(London) 16 Okt 2020. Weeraryahanka kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Germany ee Timo Werner ayaa qeexay farqiga u dhexeeya horyaalada Ingiriiska iyo Jarmalka.
24 jirkaan ayaa u dhaqaaqay kooxda reer London ee Chelsea xagaagii la soo dhaafay isagoo ka kaga soo biiray naadiga RB Leipzig aduun dhan 53 million euros.
Sida uu daabacay wargeyska “Goal” ee dalka England Timo Werner ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Aniga ahaan, waa riyo ii rumowday waqti yar gudahood, inaan imaado oo aan ka ciyaaro haatan horyaalka ugu weyn adduunka oo dhan”.
“Dabcan, cunug ahaan, ma arkaysid kooxo badan oo Premier League ah, laakiin waxaad arkaysaa kooxaha Champions League, sida Chelsea iyo Manchester United, kuwani waxay ahaayeen kooxihii wax badan ku guuleysanayay”.
“Waxaad arki kartaa Cristiano Ronaldo oo daa’yar ah, ama halkan Chelsea Didier Drogba iyo sidoo kale Frank Lampard, tababaraha, halyeeyo badan ayey halkan ku leeyihiin kooxda”.
“Markaad timaaddo kooxdii ay u ciyaarayeen oo aad arki jirtay adigoo caruur ah sida Ashley Cole, Frank Lampard iyo Petr Čech, waxaad dhaheysaa (Waa waali, aniga ayaa hadda iyaga la jooga).
Intaas kaddib Timo Werner ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya horyaalada Premier League iyo Bundesliga, wuxuuna yiri:
“Xaallada waxay aheyd xoogaa wax adag taageero la’aan waayo waxaan u maleynayaa in taageerayaasha England ay door muhiim ah ciyaarayaan, gaar ahaan halkan, inta ay socoto ciyaarta oo dhan”.
“Way ka duwan tahay maxaa yeelay Jarmalka marwalba way heesaan oo baashaalaan, laakiin halkan waxaa jira kala duwanaansho badan, waxay daawadaan ciyaarta waxayna la falgalaan marka aad fursad ama gool dhaliso, dareenkani waa mid gaar ah”.
“Waxaan sidaas ku dareemay Leipzig markii aan la ciyaareynay Tottenham, waxay ahayd dareen waali ah, wuxuu ahaa dareen ka duwan kan Bundesliga”.
Ray Hudson oo tilmaamay in James Milner uu la mid yahay halyeeyga kooxda Inter Milan